Maxaa iskabadalay BBC-da Laanta Afka Soomaaliga? | wariyaha
Maxaa iskabadalay BBC-da Laanta Afka Soomaaliga?
July 17, 2014 | Filed under: SAXAAFADA | Posted by: admin
Number of View: 14373
Idaacadda BBC-da Laanteeda afka Soomaaligu muddo aab u farabadan ayeey ahayd meel dadka intooda badan ay ka bartaan luuqadooda waayo waxaa ka hadlijiray khuburo aad ugu xeeldheeraa isticmaalka ereyada ku haboon waxa ay ka hadlayaan.
Wariyayaalbadan ayaa kudayanjiray suxufiyiintii halkaasi ka hadli jirtay sida Cabdullahi Xaaji,Yoonis Cali Nuur, Cabdirnuur iyo Ragkale, sababtoo ah waxay aad ugubogi jireen sida ay wax u qoraan iyo sida ay codkooda u isticmaalaan xilliga ay idaacadda ka hadlayaan.
Suxufiyiinbadan waxaa ay ku riyoon jireen in ay mar un ka hadlaan Idaacadda BBC-da oo runtii mar ahayd meel waxkasta oo ay sheegto dadku aaminijireen lana oranjiray BBC ayaa sheegtay.
Tobankii sano ee ugu danbeeysay BBC-da Waxbadan ayaa iska badalay Sababtuna waxaay ahayd qaar kamid ah shaqaalihii mudo badan kashaqeynayay oo iskaga tagay sababo laxidhiidhay isfahmiwaa dhexmaray iyaga iyo madixii BBC-da ee Xilligaasi.
Inkastoo shaqaqdii BBC-da aysan waxba iska badalin hadana codod latabayay ayaa meesha kabaxay ,Cowke,Hareeri,Aamina iyo Kuwo kale waxaase baddalkoodii BBC shaqaaleysiisay wariyayaal da’yar balse aan lahayn khibraddii aylahaayeen wariyayaashii hore.
Inkastoo dadbadani wax kasheegaan qaabka ay BBC-du shaqaalaha ku xulato balse waxa ugu horeeyaa waa Aqoon Jaamacadeed iyo mid la xidhiidha tabbarada ay BBC-du Bixin jirtay sida ay sheegaan wariyayaashii horay looshaqaaleysiiyay .
Hadabab Maxaa ugu wacan in BBC-du Af-soomaaligii Ka habaabay Sanadihiidanbe?
Waa run waxaa jira wariyayaal badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo kuwanaagsan qorista iyo kuhadalka Afka Soomaaliga balse waxaa jira halsabab oo ay shaqo uga heliwaayeen BBC-da.
Joogbal ! ha lasooboodin qof jeclaysi ,Qabiil iyo waxaan loo joogin oo ah waxa dadkeena gaadhsiiyay meesha ay maanta joogaan ..
Marka BBC-du qaadaneyso qof shaqaale ah waxaa ay eegtaa laba arrimood oo kala ah aqoonta Saxaafadeed ee qofku inta ay gaarsiisantahay ,heer Jaamacadeed, Kolej ama Tababar, iyo waayo aragnimadiisa saxaafadeed labadaasi oo aysan lahayn inta badan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee dal iyo dibad ku nool.
Hadaba arintaasi waxay keentay in dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool dalka Kenya halkaasina wax kubartay ay helaan fursado ay waayeen wariyayaashii Soomaaliya ee muddada badan shaqeeynayay.
Tusaale ahaan BBC-da ayaa Waxaa kabanaanaday laba Fursadood oo ah Wariye Wartabiye ah qorikana warka iyo barnaamijyada, Shuruudaha wariyahaasi lagarabo waa in uu heystaa Shahaado jaamacadeed kuna hadlikaraa qorina karaa Afafka Soomaaliga iyo Ingiriiska , marka fursadaasi timaado wariyayaasha Soomaaliyeed ee iskuheysta in iyga oo kali ah ay suxufiyiin caan ah yihiin ma kulatahay in ay ka faa’iideysan karaan?
Hadii jawaabtu maya tahay waa arintaasi midda keentay in dhalinyaradaasi Kenya kubar baartay ee aan si fiican u aqoon qorista iyo ku hadalka Afka Soomaaligu ay Fursadahaasi helaan waayo Shahaado Jaamacadeed ayeey heystaan.
Kafaa’iideyso waqtigaga inta goori goortahay .
3 Responses to Maxaa iskabadalay BBC-da Laanta Afka Soomaaliga?
marka hore waa ku mahadsan tihiin qodobkaan aa noo soo ban dhigteen, marka xiga wax toosin ma xumo lakin qofkii wax toosin laha hadow isagaba toosneen soo dhibkeeda mahan. marka la fiiriyo qoraalkan wax yaabo badan ayaa jiro oo ka qaldan fadlan marka wax qoreysiin ugu yaraan waa in editor jiraa oo hal qof kaliya aanu inta qoraal sameeyo ku daabicin page ka.waa rayigeyga intaasiiyo sidey aniga ila tahay
Inta aadan ka hadlin qaladka dhigaalka soomaaliga ee bbc-da, fiicnaan laheydaa haddii aad iska sixi laheyd qaladaadka higaada iyo naxwaha ee qoraalkaada ka buuxa.
asc. aniga fikirgayka waxaa waye bbc somali hadda wey udhamaatay waayo .waxaa dilay tafadirihi hore ee ladhihi jiray yussuf garad.oo ka dhigay meel ay qos keliya iska leyihin laanta bbc somali. weyna adag tahay in ay ku sonoqoto bbc somali cadaladi laku yaqaanay iyo wararki la amiini jiray ama la ruumeysan jiiray warka ay sheegi jirtay bbc somali. awal waxaa dhegeysan jiiray dadka waweyn ama mudagarka ah .hadda ma argaysid dad kudhahaya bbc somali ayaan sodhageysanaya .waayo hadda wararka ay sheegto bbc somali war sugan maha ama la rumeysan karo.wabilahi towfiiq